NAVY US: Biyaha laga cabbo Hawaii si ay shidaal ugu sumoobaan?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » NAVY US: Biyaha laga cabbo Hawaii si ay shidaal ugu sumoobaan?
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • News • Wararka Mareykanka
Xarunta Kaydinta Shidaalka ee Red Hill Bulk ee Jaziiradda Oahu, oo loo yaqaan xarunta Navy Red Hill ayaa la dhisay horraantii 1940-meeyadii intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Waxay ka kooban tahay 20 taangiyada shidaalka ee dhulka hoostiisa ah, iyo shabakad dhuumo ah oo shidaalka geysa Pearl Harbor, iyo meelo kale.
Xaruntani miyay ku dhowdahay inay shidaal ku shubto biyaha la cabbo ee jasiiradda?
Ciidanka badda ee Maraykanka iyo gobolka Hawaii ayaa dhibaato haysta.
Qofka sirta ah ayaa u sheegay Waaxda Caafimaadka ee Hawaii bishii Sebtembar in saraakiisha ciidamada badda ay bixiyeen marag been ah oo ay qariyeen macluumaadka ku saabsan daxalka xarunteeda shidaalka Red Hill ee Oahu.
Sida laga soo xigtay warbixin ku jirta Civil Beat, warbaahinta Hawaii ku salaysan waxaa laga yaabaa inay dhibaato ka haysato bixinta biyaha nadiifka ah ee Honolulu.
Daxalka ayaa laga yaabaa in uu qaab-dhismeedkan khatar geliyo si uu shidaal ugu soo shubo saadka biyaha jasiiradda.
Iyadoo la tixraacayo macluumaadkaas, qaybtu waxay weydiisay Agaasimaha Caafimaadka Libby Char inuu dib u furo dacwad sharci ah oo gacan ka geysan doonta go'aaminta masiirka xaruntan da'da ah.
Afhayeen u hadlay Ciidanka Badda ayaa u sheegay eTurboNews ma jirin wax daadasho ah, xaaladduna waa ay deggan tahay xilligan.
Wuxuu tixraacay bogga internetka ee NAVY-ga Mareykanka: https://cnic.navy.mil/regions/cnrh/om/red-hill-tank.html
Boggaan waa la dhimay oo tan waa la aqoonsaday, laakiin beddel kale lama siin.
Shidaal badan oo soo daatay tobanaankii sano ee la soo dhaafay tan iyo markii la rakibay ayaa walaac xoogan ku abuuray dadka deegaanka iyo kuwa u dooda deegaanka kuwaas oo ka baqaya in biyaha la cabbo ee ku hoos jira haamaha ay ku sumoobaan shidaal.
Tani waxay khatar gelin kartaa badbaadada deganayaasha iyo booqdayaasha degmada Honolulu.
Dhegeysiga dacwadda lagu muransan yahay ayaa la bilaabay ka dib markii Naadiga Sierra Club ee Hawaii iyo Guddiga Biyaha ee Honolulu ay ka soo horjeesteen codsiga Navy 2019 ee ogolaanshaha hawlgalka. Dhagaysiyada ayaa la qabtay horraantii bishii Febraayo waxaana dib loo furay bishii Luulyo ka dib markii shidaal laga sii daayay tuubo qaraxday mid ka mid ah tunnelka dhulka hoostiisa ee xarunta.
Sebtembar 16, sarkaal ka tirsan ciidamada badda oo u dhaqmaya sidii qof sir ah ayaa ku wargaliyay xafiiska Qiimaynta Khatarta iyo Gurmadka Degdegga ah ee DOH in marag aan sax ahayn la gudbiyay, xogta muhiimka ahna ay si khaldan u qariyeen Ciidanka Badda dacwadda la isku haysto."
Ninkan been abuurka ah ee ciidamada badda waxaa wareystey xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Hawaii bishii Oktoobar, qoraalka ayaa lagu yiri.
Qofka ayaa sheegay in baaxadda buuxda ee kaabayaasha nidaamka haanta kaydinta dhulka hoostiisa, oo ay ku jiraan dhuumaha, aan loo shaacin gobolka codsiga oggolaanshaha Ciidanka Badda, iyo in macluumaadka ku saabsan taariikhda daxalka si khaldan loo qariyay, sida ku cad qoraalka.
eTurboNews la xidhiidhay Gudoomiyaha Gobolka, Lt. Badhasaabka, iyo duqa magaalada Honolulu iyada oo aan wali jawaab laga helin.